बिश्व रक्तदाता दिवस,जून,१४ काे सन्दर्भमा ! - City Post Daily
बिश्व रक्तदाता दिवस,जून,१४ काे सन्दर्भमा !
June 14, 2020 June 14, 2020 सिटी खबर
बिश्वभर आ-आफ्नो स्वच्छाका साथ स्वयंसेवी तवरले रक्तदान गर्नुहुने स्वयंसेवी रक्तदाताहरूकाे सञ्जालले रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त-तत्वहरूकाे आवश्यक पर्ने पीडित पक्षलाई उपलब्ध गरांउदै सेवा प्रदान गरिंदै अाएकाे सबैलाई थाहा भएकाे नै कुरा हाे ।
हाम्रो शरीरमा नियमित निरन्तर प्रवाह भईरहने रगतकाे बिकल्प हालसम्म कुनै बैज्ञानिकहरूले आविष्कार गर्न सकिएकाे छैन । मानव चिकित्सा बिज्ञानमा याे एउटा चुनाैतीपूर्ण तवरले उभिएकाे छ । स्वयंसेवी रक्तदाता बाहेक यसकाे बिकल्प अरू कुनै छैन । उपचारका क्रममा रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त-तत्वहरूकाे उपलब्धता कहाँबाट ? कसरी गर्ने त ? सरकार र सम्बन्धित निकाय याे मामिलामा माैन प्रायः छ । फेरि पनि हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरू संगठित तवरले याे अावश्यक्ता पूर्तिका लागि जुटिरहेका छाैं । स्वयंसेवी रक्तदाताहरूकाे कसरी यस क्षेत्रमा सहभागीता गुणात्मक गराउने भनि हामी हरबखत चिन्तित हुने गर्थ्याैं । तर सरकारी संयन्त्र र सम्बन्धित निकायमा भने यसबारेमा गम्भीर हुन सकेकाे छैन । स्वयंसेवी रक्तदाताहरू बिना यस क्षेत्र पूर्णत: अधुरो,अपुराे मात्र हाेईन,निकम्मा नै साबित हुनेछ ।
त्यसैले हामीहरू “प्रत्येक स्वस्थ्य युवायुवतीहरूले आफ्नो १८अाैं बर्षकाे जन्माेत्सवसंगै रक्तदानकाे शुभारम्भ गराैं ।” भनेर हलपल आह्वान गर्दै आईरहेका छाैं । याे आह्वानलाई व्यबहारिक रूपमै सार्थक सिध्द पार्दै परभस ज: आचाजुले नेपालमा मात्र नभई संसारमै प्रथम पटक आफ्नो १८अाैं बर्षकाे जन्मदिनमा रक्तदान गरि इतिहास रच्न सफल हुनु भएकाे छ र याे रक्तदान कार्यलाई नियमित निरन्तरता दिंदै आईरहनु भएकाे छ । यि र यस्तै भावना भएका युवायुवतीहरूलाई समेटिएर गठन गरिएको Start 18 Stars Team काे अाधिकारि तवरले घाेषणा गत २०७० साल जेष्ठ १७ र १८ गते
नेपाल कै इतिहासमा आई.एफ.बी.डी.अाे.का अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष जियान फ्र्यान्काे मास्साराे(इटाली) र नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यद्वारा Start 18 Stars Team काे अवधारणा-पत्र र यसकाे लाेगाे संयुक्तरूपमा प्रथम पटक आयाेजित स्वयंसेवी रक्तदाताहरूकाे राष्ट्रिय भेलामा लाेकार्पण तथा अनावरण गर्नुभएकाे थियाे । अवधारणा-पत्रकाे पूर्ण ब्यहाेरा –
यसरी आफ्नो १८ औं वर्षको जन्म दिन रक्तदान गरि मनाउंदै प्रत्येक तीन/तीन महिनाकाे अन्तरालमा नियमित रक्तदान गर्दै रगत र रक्त तत्वहरूकाे आपूर्तिमा सहज बनाउन याेगदान पुर्याउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
माथि उल्लेखित उमेरका युवायुवतीलाई संगठित गर्दै यसकाे उद्देश्यनुरूप उक्त समूहलाई सहि तवरले परिचालन गर्दै स्थानीय स्तरमा उ.मा.वि. र साे सरह उमेर पुगेकाहरू बीच समन्वय गरि रक्तदान कार्यलाई प्रभाबकारि ढंगबाट समाजमा संचालन गर्नु याे अवधारणाकाे प्रमुख कार्य हुनेछ । यसले नयाँ नयाँ रक्तदाताहरूकाे बृध्दि हुने क्रम बढ्ने बिश्वास लिएकाे छ । यदि काेहि पनि १७ वर्ष पूरा गरि १८ वर्ष पुगेर आफ्नो जन्मदिन रक्तदान गरि मनाउन चाहनु हुन्छ भने हामी तपाईंको घरमा आई परिवारजन,आफन्त र साथि भाइहरू बीच रक्तदान गराउने व्यवस्था मिलाउने छाैं । यसबाट तपाईंलाई शुभकामना व्यक्त गर्ने साैभाग्य प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएका छाैं ।
याे अवधारणालाई केवल हाम्रो देशमा मात्र सिमित राख्नु हुन्न । यसकाे बिश्वब्यापीकरणले स्वयंसेवी रक्तदाताहरूकाे संख्यात्मक बृध्दि हुनेमा दुई मत हुने छैन । साँच्चै नै याे अवधारणालाई पछ्याउने हाे भने समाज नै स्वस्थ्य हुनेछ । कारण स्वयंसेवी रक्तदाता हुन त्यति कै पाईंदैन । यसका नियमहरू अनुसासित भएर पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र नियमित स्वयंसेवी रक्तदाता हुने शाैभाग्य मिल्ने छ । स्वयंसेवी रक्तदाता हुनेहरू हरेक किसिमका कुलतबाट टाढा हुन जरुरी छ । धुम्रपान, मध्यपान अादिबाट टाढा हुुन अति जरुरी छ । यसरी परेज भित्र बसि नियमित रक्तदान गर्न सक्ने छ । निरन्तर नियमित रक्तदान गर्नु भनेको आफू स्वयं स्वस्थ्य हुनुकाे परिणाम हाे ।
रक्त व्यवस्थापनमा हामी संधै केवल सभा,सम्मेलन,गाेष्ठि, अन्तरक्रिया,य्राली अादि कृयाकलापमा मात्र सिमित नराखि माथि उल्लेखित Start 18 stars Team काे अवधारणा समेटिएको पठनपाठनकाे लागि पाठ्यक्रम नै तयार गर्न ढिलो भईसक्याे । बिद्यार्थी भाइबहिनीहरूले सैधान्तिक रूपमा रगत र रक्त-तत्वहरूका बारेमा जानकारी आफ्नो गुरूहरूबाट कक्षा काेठामा हाँसिल गर्दै जाने छ । रगत र रक्त-तत्वहरूकाे बारेमा जिज्ञासा र काैतुहल्ता पूरा हुँदै बुझ्दै जाने छन् । अनि जब आफू १८ बर्ष पुग्छ र १८ अाैं बर्षकाे जन्मदिनलाई समाज सेवाकाे सन्देश तर्फ परिणत गर्न आफै लालायित हुनेछ । जस्ले गर्दा समाजमा एकजना स्वयंसेवी रक्तदाताकाे पदार्पण हुनेछ । यसरी रक्तदान कार्य तर्फ उत्प्रेरणा जगाई स्वयंसेवी रक्तदाताहरू काे संख्यामा क्रमिक बृध्दि हुने अाशा एवं बिश्वास लिन सकिन्छ ।
आफ्नो १८ बर्षकाे जन्मदिनलाई रक्तदान गर्दै मनाउनेहरूकाे संख्यामा क्रमिक बृध्दि हुँदै आईरहेकाे छ । देशभरबाट सयाैंकाे संख्यामा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजद्वारा यस्ता उत्प्रेरित स्वयंसेवी रक्तदाताहरू तयार भई सकेका छन् । यिनिहरूद्वारा नै उत्प्रेरणाका कक्षा तथा प्रशिक्षण दिंदै नयाँ नयाँ स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउंदै आईरहेका पनि छन् ।
आजकाे याे पुनीत दिनदेखि नै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूकाे जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूकाे मन मस्तिष्कमा रक्त व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउनमा त्याग,संबेदनसिल र समर्पणकाे भवना बिकसित हुन जरुरी छ । तव मात्र पीडित पक्षलाई अावश्यक्तानुसारकाे सेवा समयसापेक्ष प्रदान गर्नमा सफलता मिल्नेछ ।-